Wariye Xasan Heykal iyo xariggii Xabsiga Dhexe: Muxuu Heykal kala kulmay, yuu se ku soo arkay Xabsiga Dhexe ee Bossaso? – Radio Daljir
Seteembar 18, 2019 12:54 b 2
Wariye Xasan Heykal oo ka hawlgala xarunta Daljir Bossaso ayaa subixii Talaadada waxaa looga yeeray Saldhigga Booliska Bossaso, waxaana isla markiiba loo taxaabay Xabsiga Dhexe ee Bossaso.
Haddaba, Xasan Heykal oo aan loo sheegin waxa lagu haysto, la tusin warqadda waaranta ee maxkamadda, laakiin si aad u wacan oo tixgelin mudan loola dhaqmay, lana geeyey xabsiga, muxuu kala kulmay xabsiga, yuu se ku soo arkay Xabsiga Dhexe ee Bossaso?
Waxaa waraystay wariye Maxamuud Cabdi Ibraahim, waxa uuna weydiiyey su’aalo ay kamidyihiin, yaa ku xiran xabsiga dhexe, maxaa loo soo xiray dadkaas, yey se u xiranyihiin? Hoos kaga bogo.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 463 Wararka 18177
Abdirahman 5 months ago
Waa mamnuuc in loo hanjabo warbaahinta sharciga ilaalsha baa leeyahay idaacada waxay ifisaa dadka xuquuqdooda lagu tunto waana xaqiiq taas dalmar garabkaaga ayaa taagannahay cidne hka baqin
Qofne sharciga kama sareeyo